Antsafa · Jolay, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Antsafa · Jolay, 2018
Tantara mikasika ny Antsafa tamin'ny Jolay, 2018
[Lahatsary] Antsafa niarahana tamin'i Kwanele Butana avy ao amin'ny Grocott's Mail
Mpandrindra ny fandaharanasan'ny asa fanaovan-gazetin'ny olon-tsotra ao amin'ny gazety Grocott's Mail ao Grahamstown, Afrika Atsimo i Kwanele Butana. Tetikasa "The News is Coming" naorin'ny Knight News Challenge ny fandaharanasa. Ato amin'ny lahatsary, manoritsoritra ny maha-zava-dehibe ho an'ny mpanao gazety olon-tsotra ny fanoratana momba ny vodrom-piarahamoniny ao an-toerana i Kwanele.
Mialy Andriamananjara miresaka momba ny Foko
Tapa-bolana lasa izay, niresaka tamin'i Lova Rakotomalala, iray amin'ireo efatra mpandrindra ny fandaharana fanentanana ao amin'ny bilaogy FOKO Madagasikara aho. Amin'ity herinandro ity, dia ampiseho lahatsary misy resadresaka niarahana tamin'ny mpiara-miasa amin'i Lova, Mialy Andriamananjara isika.
Tafatafa niarahana tamin'i Ghaida'a Al Absi
Ghaida'a al-Absino no mpitarika ny fanomezam-bahana ny vehivavy mpikatroka amin'ny teknikan'ny media ao Yemen, izay manazatra ny vehivavy Yemenita mpikatroka amin'ny media nomerika.